Tezitra amin’ny tsy nahatafidirana ao amin’ny Vondrona Eoropeana ny Albaney; ‘mbola mamiratra’ ny masoandro, hoy kosa ny PM · Global Voices teny Malagasy
Setriny avy any Albania rehefa nobahanan'ny filoha frantsay ny dinika fampiatiana
Voadika ny 24 Oktobra 2019 8:33 GMT
Vakio amin'ny teny Shqip, Français, Italiano, Español, English
Ireo sainan'i Albania sy ny Vondrona Eoropeana ao Gjirokastra, Albania Nopihantsary tamin'ny Jolay 2006 avy amin'ny mpisera Flikr Nomad Tales, CC BY-NC-ND.
Tsy nahavatra ny Vondrona Eoropeana (EU) hanokatra fifampiresahana amin'i Albania sy i Makedonia Avaratra ao anatin'ny gidragidra ifanaovana amin'ireo politisiana pro-EU ao amin'ireo firenena Balkana Tandrefana bitika ireo.
Tamin'ireo fihaonana izay nifanaovana nandritra ny farany herinandron'ny 19 Oktobra, notaomin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron ireo firenena vitsivitsy mpikambana amin'ny fanakanana dinika fampidirana ho mpikambana ireo firenena roa be fanantenana ireo. Voataonan'i Macron i Danemarka sy i Holandy amin'ny fandavana an'i Albania fa i Frantsa irery no nitsipaka an'i Makedonia Avaratra. Mila ny fankatoavan'ny firenena rehetra mpikambana ao amin'ny EU ny fampidirana mpikambana vaovao.
Tsy teo amin'ny politisiana sy ny vahoaka tany Albania sy Makedonia Avaratra ihany no nandray ratsy izao tsy fahampian'ny fifanarahana izao fa teo amin'ny fanjakam-birao ao Brussels ihany koa.
Ny filohan'ny Vaomiera Eoropeana, sampana mpanatanteraka ao amin'ny EU, Jean-Claude Juncker no nilaza fa teo am-panaovana “fahadisoana manantantara” ny EU, raha nosoritan'ny Filohan'ny Filankevitry ny Vondrona Eoropeana Donald Tusk fa tsy i Albania sy i Makedonia Avaratra no diso amin'io.
Tiako ny mandefa hafatra amin'ireo namanay Makedoniana sy Albaney: aza ketraka! Nahavita ny anjaranareo ianareo fa tsy izany kosa izahay. Saingy tsy misalasala kosa aho miteny fa ho mpikambana feo ao amin'ny Vondrona Eoropeana ianareo.
Rendrika tao anatin'ny krizy politika i Albania hatramin'ny Febroary 2019, rehefa nilaza ny fanadihadiana navoakan'ny Voice of America sy ny Tambajotram-Pitateram-Baovao Fanadihadiana Balkan fa niasa niaraka tamin'ny tambajotran-jiolahy ny manampahefana ao amin'ny governemanta hanaovana fividianam-bato nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2017. Tsy nandray ny tokony ho asany ireo depiote avy amin'ny mpanohitra ary nidina an-dalambe hitaky ny fialan'ny Praiminisitra Edi Rama sy nitaky ny fananganana governemanta transnasionaly hanara-maso ireo fifidianana natao vao haingana.
Nohidian'ny Antoko Demaokraty sy ny Hetsika Sosialista ho amin'ny Fampiatiana, notsinian'ny mpanohitra i Rama noho ny tsy fahombiazana tamin'ny fanombohan'ny fifampidinihana hidirana ao amin'ny Vondrona Eoropeana. Ampirisihan-dry zareo Rama hanaraka ny dian'i Makedonia Avaratra, izay nanambaràn'ny praiminisitra Zoran Zaev fifidianana mialoha ny fotoana vantany vao hita ny fanapahan-kevitry ny EU tamin'ny herinandro.
Tsinian'ny mpanohitra ao Albania ny PM ho tsy nahomby tamin'ny dinika idirana EU, ampirisihana ny fifidianana mialoha ny fotoana
Nohazavain'ny PM Rama fa tsy nahomby ny fidirana tao noho ny olana ao anatin'i EU, fa tsy hoe tsy nahafeno ny fepetra notakiana i Albania. “Hisy ny andiam-pifandraisana amin'ny filoha frantsay sy ireo firenena hafa mpikambana mba hahatakarana bebe kokoa ny fandrosoana amin'ity fizotra ity”, hoy i Rama.
Saingy tsy noraharahiany ihany koa ny vokatry ny fanapahan-kevitry ny EU rehefa niteny izy: “Araka ny hitanao, mbola mamiratra ny masoandro, mbola manjelanjelatra ny andro.”
Rama: fifandraisana vaovao miaraka amin'i Macron
Mazava loatra fa tsy faly ny Albaney sy ireo hafa ao Balkana Andrefana, raha jerena ny Twitter:
Fahadisoana goavana sy tsy mampazoto manao fanavaozana ny fanapaha-kevitry ny mpitarika ny EU tsy hampiditra mpikambana vaovao. Na izany aza dia tsy maintsy mifantoka hatrany amin'ny fanamafisana ny fanjakan-dalàna, ny ady amin'ny kolikoly sy ny fikambanan-jiolahy ny roa tonta.
Ity no fahadisoana goavana indrindra nataon'ny EU tamin'ity taona ity, firenena eo ampanavaozana izay tena nila ity fanapahan-kevitra ity i Albania mba ahafahany mamehy ny tadin-kirarony hizorana haingana kokoa mankany amin'ny fanaovaozana.
Ny hafa mijoro mifahatra tsara amin'ny filazana fa ny fiatiana ao amin'ny EU “no lalan-tokana” ho an'i Albania.
Mila Dina amin'i Eoropa i Albania amin'izao fotoana, mba hahatontosa ny fepetran'i Bundestag ary hanohy ny fanavaozany. Angamba isika ho vonona kokoa rehefa horesahana indray ny fifampidinihana amin'ny herintaona mialoha ny vovonan'i Zagreb, mey 2020. Ny Fiatiana ao amin'ny Vondrona Eoropeana irery ihany no lalan-tokana ho an'i Albania.